Sep232020 by साहारा संदेशNo Comments
रबी लामिछेनेले गरे यस्तो भिडियो सार्वजनिक: सरकारलाई गरे सावधान (पुरै भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौं : अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसी’लाई वीर अस्पताल’स्थित राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर लगि:एको छ । जुम्लाबाट अनशनकै क्रममा काठमाडौं आएका डाक्टर केसी:लाई त्रिभूवन विमानस्थ:लबाट सीधै ट्रमा सेन्टर लगिएको हो । उहाँ त्रिवि शिक्षण अस्पता’लका अवका’श प्राप्त डाक्टर हुनुहुन्छ । उहाँलाई जबर’जस्ती ट्रमा सेन्टरमा प्रह’रीले लगेको सहयोगीह’रुले बताएका छन् । त्यस्तै चर्चित पत्रकार रबि लामि’छाने ले सरकारलाई चेतावनी दिँदै यस्तो लेखेर भिडियो पोस्ट गरेका छन् : के हुदैछ यो देशमा??? डा. गोबिन्द के सी को ज्या’न तलमाथी भयो भने धेरै कुरा तलमाथी होला है। “तलमाथी” मतलब अहिले “माथी” छौ भन्ने ठान्नेहरु “तल” रसतलमा पुग्न सक्छन्। खबरदार, अति नगर !!!...
Aug62020 by साहारा संदेशNo Comments
"बच्चा भेटिएको सबै नाटक रहेछ, भाग्य न्यौपाने पुगेर गरे पर्दाफास" यो शीर्षकको भिडियो बुधबार बिहान युट्युबको नेपाल ट्रेन्डिङमा तीन नम्बरमा छ । सम्भवतः आजै एक नम्बरमा उक्लिएला । मात्र १९ घन्टामा ७ लाख ३३ हजार पटक हेरिएको छ भने ८ हजारभन्दा बढीले कमेन्ट गरिसकेका छन् । १९ लाख सब्स्क्राइबर रहेको ‘तातात्तो खबर’ नामक युट्युब च्यानलबाट यो भिडियो मंगलबार बिहान पोष्ट भएलगत्तै फेसबुकमा समेत भाइरल भएको थियो । टाइटलबाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ, भिडियोको विषयवस्तु । भिडियो बनाउने युट्युबरको नाम टाइटलमै देख्दा धेरैलाई आश्चर्य नलाग्ला, किनकि यो शैली नेपालमा नयाँ होइन । पत्रकारिता बुझेका तर नेपाली युट्युबकारितालाई नबुझेकाहरुलाई भने यो शैली पचाउन गाह्रो हुन सक्छ । टाइटलले दुईवटा कुरा बोलेको छ । प्रहरीले निस्कर्ष निकालिनसकेको वा निकाल्न नसकेको कुरालाई टाइटलमै ठोकुवा गरिएको छ । र, त्यसको आफूले ‘पर्दाफास’ गरिद...
Jul292020 by साहारा संदेशNo Comments
काठमाडौ । विश्वभरी नै लोकप्रिय बन्दै आएको एप टकटक अब पैसा कमाउने बाटो बन्ने भएको छ । विश्वका धेरै मानिसले खाता खोलिसकेको टिकटकले अब प्रयोगकर्तालाई पैसा दिने घोषणा गरेको हो । विभिन्न गीतका क्लिपमा नाच्ने र अभिनय गरेर अपलोड गर्न मिल्ने यो एप विश्वभर दुई करोड बढी पटक डाउनलोड भैसकेको एपमा पर्दछ । यसका विश्वभर ८० करोड बढी सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेको आँकडा छ । नेपालमा पनि यसका लाखौं प्रयोगकर्ता रहेका छन् । टिकटकले राम्रो कन्टेन्ट क्रियट गर्ने प्रयोगकर्तालाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय लिएसँगै अब यो कमाउने बाटो भएको हो । राम्रो कन्टेन्ट बनाउने प्रयोगकर्तालाई त्यसमा आएको भ्यूज र कमेन्काट आधारमा पैसा दिने निर्णय टिकटकले गरेको छ । त्यसका लागि अमेरिकामा २ सय मिलियन डरको कोष बनाएको सीएनएनले जनाएको छ । हाल यो योजना अमेरिकामा मात्र लागु हुनेछ। पछि यो विश्वभरी पुग्नेछ । टिकटकका अमेरिका महाप्रबन्ध...
Jul282020 by साहारा संदेशNo Comments
काठमाडौं । तस्बिमा निकै सुन्दर देखिन्छन् । त्यो सुन्दर बच्चालाई कसैले कार्टुनमा राखेर झा’डीमा फा’लेको अवस्थामा बालबालिकाले देखेपछि आफ्नो अभिभावकलाई बोलाएका थिए । काठमाडौंको कपन स्थित झा’डीमा बालबालिकाले बच्चालाई कार्टुनमा फेला परेका थिए । सोमवार साझ ६ वजेतिर बालबालिकाहरु खेल्न त्यता जाँदा बच्चालाई कार्टुनमा देखेका थिए । झा’डीमा रो’इरहेको बेलामा बच्चा देखेको उनीहरुले बताएका छन् । त्यहाँका स्थानियहरु पानी लिन जाने ठाउँ हो । निकै धेरै मानिसको चहल पहल हुने स्थानमा कसले बच्चा त्यसरी अलपत्र छोडेर हिड्यो भन्ने पनि खुलेको छैन । क्वालिटी बिस्कुटको कार्टुनमा सानो बालिकालाई राखिएको थियो । उनी कति दिन अघि जन्मिएकी हुन् भन्ने पनि खुल्न सकेको छैन । बालबालिकाले तत्काल देखेका कारण अहिले उनी सुरक्षित छन् । स्थानिय एक महिलाको संरक्षणमा ति बालिका छन् । पानी परिरहेको बेलामा बच्चा रो’एको सुनेपछि ब...